Muxuu ahaa Ajendaha kulankii maanta ee gudiga joogtada ah ee Golaha shacabka? – Radio Muqdisho
Muxuu ahaa Ajendaha kulankii maanta ee gudiga joogtada ah ee Golaha shacabka?
Ujeedka Kulanki maanta ee guddiga joogtada ah ee golaha shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa dejinta qorshaha horu tebinta u leh fadhiyada golaha shacabka ee kalfadhigooda lixaad, waxaana kulanka shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Kulanka oo sidoo kale ay goob joog ka ahaayeen guddoomiye kuixgeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey iyo guddoomiye kuxigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa guddoomiyaasha guddiga joogtada ah waxaa loga dhageystay warbixino la xiriira gudi walba sharciyada horyaala iyo sida ay u kala horeeyaan.
Xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa kulanka ka dib la hadlay warbaahinta qaranka waxa uuna u faah faahiyay qodobadii ugu dambeyn kulanka kasoo baxay
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Dhagax dhigay xarunta Qaran ee gurmadka deg-degga ah+Sawirro
Wasiirka Haweenka oo ku dhawaaqday soo saarista billowga diyaarinta sharciga Qaran ee xuquuqda naafada Soomaaliya